आज नेपाल बैंकका देशभरका कुन-कुन शाखाहरु खुल्छन् ? हेर्नुहोस् Canada Nepal
आज नेपाल बैंकका देशभरका कुन-कुन शाखाहरु खुल्छन् ? हेर्नुहोस्
भाद्र १९ २०७७
काठमाडौं - शुक्रबार नेपाल बैंक लिमिटेडका देशभरका विभिन्न शाखाहरु खुल्ने भएका छन् ।
कोरोनाभाइरसको संक्रमणलाई मध्यनजर गर्दै बैंकले आज पनि आफ्ना देशभरका विभिन्न शाखाहरु खोल्ने भएको हो। बैंकले हरेक बार आफ्ना देशभरका फरक फरक शाखाहरु खोल्दै आइरहेको छ ।
कोरोनाभाइरसको संक्रमणको अवस्थामा सुरक्षाका उपाय अवलम्बन गर्दै बैंकले देशभरका विभिन्न शाखाहरु विहान १० बजेदेखी ३ बजेसम्म खोल्ने भएको हो । आज देशभरका कुन कुन शाखाहरु खुल्छन् हेर्नुहोस्
भाद्र १९, २०७७ शुक्रवार १३:२९:३६ बजे : प्रकाशित